Netflix dia hameno ny katalaoginy mivezivezy amin'ny votoaty 50% | Vaovao IPhone
Mikasa ny hameno ny katalaoginy streaming amin'ny atiny 50% tany am-boalohany i Netflix
Ny tanjon'i Netflix dia fenoy ny antsasaky ny katalaoginao mivantana amin'ny fandaharana tany am-boalohany nandritra ny taona vitsivitsy, araka ny notaterin'ny CFO, David Wells.
Manamarika fanosehana vaovao mankany amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tany am-boalohany sy fanolorana sarimihetsika ambony noho io salan'isa io ny fanambarana. Ny katalaogin'ny streaming dia ampahatelon'ny fomba hahatratrarana ny tanjona, hoy i Wells, izay nilaza fa nanandrana ny orinasa i "tetezamita sy fivoarana an-taonany ho an'ny atiny manokana".
Manantena ny hamoaka fandaharana 600 ora amin'ny taona 2016 i Netflixtamin'ny 450 ora tamin'ny 2015, hoy ny talen'ny atiny Ted Sarandos tamin'ny fiandohan'ny taona. Ny orinasa dia naminavina ny fandaniam-bola afa-po amin'ny tombony sy fatiantoka hampiakatra avy amin'ny $ 5 miliara amin'ny 2016 ka hatramin'ny $ 6 miliara amin'ny 2017.
Wells no nilaza an'izany Ny andian-tsarimihetsika sy sary mihetsika TV tany am-boalohany dia hitohy ho fifangaroan'ny atiny sy ny atiny novokarin'i Netflix, ary koa ny fiaraha-mamokatra sy ny fahazoana izay ataon'ilay orinasa. Ny tsenan'ny streaming dia mahita ny fihenan'ny vidin'ny famokarana sy ny isan'ny mpandoa vola mitombo, izay manamora kokoa ny maka risika amin'ny programa vaovao.
"Manana ny famatsiana sy ny fangatahana sedimentation ianao", hoy hatrany i Wells. “Tsy voatery mila mihazakazaka any an-trano ianao. Azontsika atao ihany koa ny miaina miaraka amin'ny tokan-tena, roa ary telo heny indrindra mifanaraka amin'ny vidiny ”.
Ny tanjona, hoy izy, dia ny fampahafantarana zavatra manintona ny mpikirakira tsirairay isam-bolana, ary eo anoloana izay "mbola lavitra ny làlana tokony halehantsika", amin'ny alàlan'ny karazana sy endrika samihafa. «Ny zavatra tsara momba ny lampihazo dia ny famelana fahalalahana mamorona lehibeNanampy i Wells, nanolotra ny famokarana ny fizarana halava miovaova ohatra.
Stranger Things, iray amin'ireo seho malaza farany an'ny Netflix, dia efa nanamafy ny vanim-potoana ho avy iray. Tamin'ny 31 Aogositra, nanavao ny andiany nandritra ny fizarana faharoa sivy ny orinasa, havoaka amin'ny 2017.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Mikasa ny hameno ny katalaoginy streaming amin'ny atiny 50% tany am-boalohany i Netflix
Apple Music dia mahazo vola amin'ny indostrian'ny mozika amin'ny streaming
IPhone 7 miaraka amin'ny iOS 10 dia manohana ny jailbreak